GURIGA DIGAAGGA UKUNKU WUXUU SOO SAARAA HILIB DIGAAGSAN OO KU SALAYSAN MABDA'A ISKU-KALSOONIDA - MAQAALLO
Guriga digaagga Ukunku wuxuu soo saaraa hilib digaagsan oo ku salaysan mabda'a isku-kalsoonida
Wareegga xidhitaanka hilibka hilibka digaaga ayaa waxaa maamula beeralay cusub oo ka soo jeeda Ukraine.
Nikolai Kuzmenko ma aysan aheyn oo keliya in uu koro beeraha dabacasaha dabiiciga ah ee quudinta shimbiraha, laakiin sidoo kale wuxuu abuuray qalab biogas oo u gaar ah oo u oggolaanaya inuu soo saaro bacriminta organic.
Muddo afartan sanno ah, beeralay ganacsade ah ayaa siinaya dhulkeeda nafaqooyinka iyo gaaska noolaha.
Nikolai wuxuu yiri: "Waxaan bilaabay inaan tijaabiyo isla markiiba, ka dibna waxaan ogaaday sida ay faa'iido u tahay, wax badan oo kale, hilibka aan shimbirahaygu u baahan yahay baahi weyn, waana in aynaan iloobin" in hilibka digaagduurku yahay mid aad u faa'iido badan oo si fudud u nuugaya jidhka bini'aadamka! "
Maanta Nikolay wuxuu leeyahay shaqaale badan oo Ukraine ah. In ka badan kala bar kumanaan shirkadood ayaa ku takhasusay koritaanka iyo qashinka. Waxay siiyaan waddanka oo leh 150,000 oo neef oo sanad walba ah iyo in ka badan 600 milyan oo ukun.
"Laakiin ma ahan qof kasta oo isweydiin ah inuu ku faani karo soosaarka sida aniga oo kaligiis ah - iskood isaga oo buuxa", Kuzmenko ayaa leh isagoo dhoolacadeynaya.